Torohevitra 8 hitandrina ny findainao Android ho voaro amin'ny fandrahonana amin'ny cyber | Androidsis
Miguel Gaton | | fiarovana
Fantatrao ve ny rehetra data sy mombamomba anao manokana izay hotehirizinao amin'ny telefaona findainao? Sary, horonan-tsary, ny tantaranao fitetezana Internet, hafatra, ary na dia tenimiafinao manokana aza! Ny findainao dia entam-barotra sarobidy indrindra ho an'ireo mpangalatra sy mpijirika. Aza matahotra anefa! Soa ihany fa misy ny sasany zavatra azonao atao mba hiarovana ny angon-drakitrao fandrahonana amin'ny cyber. Raiso an-tsoratra fa eto ambany dia hanome anao torohevitra 8 mahasoa aho hitandrina ny findainao Android azo antoka. Voaomana? Andao ho any!
1 1. Mametraha tenimiafina tena matanjaka
2 2. Mampiasà VPN
3 3. Ataovy izay havaozina hatrany ny rafitra fiasan-dohanao
4 4. Mitandrema amin'ny fisintomana rindranasa
5 5. Araho maso ny fahazoan-dàlana omenao ny fampiharana
6 6. Mametraha antivirus amin'ny findainao
7 7. Encrypt ny findainao
8 8. Aza mampiasa afa-tsy Google Play ho fivarotana fampidinana
1. Mametraha tenimiafina tena matanjaka
Tsy avelanao hisokatra malalaka ve ny varavaran'ny tranonao ka atahorana hisy hiditra? Izany indrindra no hataonao amin'ny findainao raha tsy mametraka teny miafina mafy ianao. Ny tendroniko voalohany dia ny fametrahana fiarovana voalohany amin'ny findainao Android amin'ny alàlan'ny fametrahana PIN na teny miafina fa tsy lamina mihetsiketsika, izay mora vaky kokoa.
Una VPN ho an'ny Android afaka mitazona ny hackers sy ny ransomware fanafihana lavitra. Ny VPN Arovy ny fiainana manokana mametraka tunnel eo anelanelan'ny telefaonao sy ny Internet. Amin'izany fomba izany, ho voaro ny hetsika rehetra ataonao am-bahoaka na amin'ny Wi-Fi misokatra amin'ny alàlan'ny findainao.
3. Ataovy izay havaozina hatrany ny rafitra fiasan-dohanao
Ny fanavaozana dia feno fampiasa vaovao ho an'ny telefaoninao, nefa koa miaraka amin'ny fanarenana fiarovana manan-danja. Izany no antony tsy ahafahanao mamela ny telefaoninao ho lany daty.
4. Mitandrema amin'ny fisintomana rindranasa
Ny toro-hevitra manaraka dia ny fandoavana tandremo ireo rindranasa apetrakao amin'ny telefaoninao. Any no misy ny ankamaroan'ny malware misy fiatraikany amin'ny telefaona finday. Noho izany, manolotra zavatra 3 aho:
Ny rindranasa ilainao fotsiny no apetrakao
izy mahalala alalana Inona no omenao rehefa mametraka rindranasa amin'ny findainao ianao?
Mametraka fampiharana avy amin'ny Google Play ihany, fivarotana fampiharana ofisialy ho an'ny Android.
5. Araho maso ny fahazoan-dàlana omenao ny fampiharana
Efa nolazaiko teo aloha io lohahevitra io, saingy heveriko fa tena zava-dehibe tokoa ny naniriako hanome azy io hevitra manokana. indraindray tsy fantatray ny angona manokana alefanay a araka ny fisian'ny fampiharana fotsiny ny fametrahana azy ireo amin'ny fitaovantsika.
Indraindray ny rindranasa izay tsy ampiasaintsika na ampiasantsika akory aza indraindray dia tsy afaka mahazo ny sarintsika sy ny horonan-tsary. Ilaina ny fahalalana an'io. Raha tsy te-hivezivezy ianao manome ny angon-drakitrao manokana amin'ireo orinasa ho takalon'ny inona, ny zavatra tsara indrindra dia izany zahao ny fahazoan-dàlana mihetsika amin'ny findainao Android ho an'ireo rindranasa napetrakao.
Ho an'izay dia mila mandeha fotsiny ianao amin'ny fizarana Fampandrenesana / Fampandrenesana / Fahazoan-dàlana fampiharana. Hahita lisitra iray miaraka amin'ireo rindranasa sy alalana ananany ianao ary afaka manova azy ireo ianao.
6. Mametraha antivirus amin'ny findainao
Misy ny fampiharana fiarovana toy ny antivirus finday izany dia hahafahanao mametraka fiarovana fanampiny amin'ny findainao mba hitazonana azy tsy ho voan'ny malware sy phishing. Mazava ho azy, alao antoka fa ny antivirus apetrakao dia azo antoka ary avy amin'ny orinasa azo antoka. Ny vahaolana dia tsy ho ratsy noho ny aretina.
Misy ihany koa ny rindranasa fiarovana izay ahafahanao miditra amin'ny findainao raha sanatria misy fangalarana na fatiantoka hitehirizana ny angon-drakitrao ary hitady ny toerana misy azy aza.
7. Encrypt ny findainao
Androany dia mahazatra be ny telefaona miaraka amina endri-tsoratra encryption ao anatiny. Amin'ny alàlan'ny fizotran'ny encryption izay vita dia avadiho ho tahiry tsy voavaky tanteraka ny angona finday ka azo antoka ny fiainanao manokana.
Tsy maintsy mametraka teny miafina fanafenana ianao ary tokony hitandrina tsara amin'izany satria amin'ny tranga maro ny tsy fetezana diso ny teny miafina matetika dia miteraka famafana ho azy ny data rehetra anananao amin'ny telefaona.
Raha jerena izany, ny tolo-kevitro dia ny hanaovanao backup.
8. Aza mampiasa afa-tsy Google Play ho fivarotana fampidinana
Efa niresaka an'io isika teo aloha, saingy io teboka io koa dia tena manan-danja tokoa ka mendrika ny ho hevi-dehibe. Manoro hevitra anao aho misintona afa-tsy fampiharana avy amin'ny Google Play Satria ny fampidinana ireo rindranasa avy amin'ny tranonkala tsy fantatra na ivelany dia mety hanimba tanteraka ny filaminan'ny fitaovanao.
Ny faharefoana dia hita hatrany amin'ny telefaona finday mahatonga azy ireo mora tohina, noho izany dia ilaina ny mahafantatra ny vaovao ary mitazona ny telefaona arak'izay azo atao.
Manao ahoana ianao miantoka ny fiarovana ny findainao? Mampiasa ny safidy rehetra ve ianao amin'ireo torohevitra teo aloha?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Torohevitra 8 hitandrina ny findainao Android ho voaro amin'ny fandrahonana amin'ny cyber
MMORPG Dark and Light dia tonga amin'ny telefaona finday, misokatra ny fisoratana anarana mialoha